Ananse Nsɛm – Twi Tales – AS WRITTEN BY BENYIN
Category: Ananse Nsɛm – Twi Tales
This page is designated for twi stories, both in the indigenous and the foreign world. Hope you enjoy the tales with me
If you’ve ever not met a market woman with her children in a trotro before boy praise the Lord, if you meet one too then you’ve really met your meter.
Ah, I was in a trotro oo.. I was sitting there saa then a woman join the car. Menkɔ hwɛ aa ɔne nkwadaa bɛyɛ 7 na ɛnam, na wa kɔ market aa ɔɔkɔ fie, na ne ho niɛma bebree paa. Mete hɔ aa na maame yi bɛ tenaa me nkyɛn pɛɛ. Herh mese ɛhɔ aa na ɔhyɛɛ aseɛ sɛ ɔɔkyekyɛ nkwadaa no nyinaa agu yɛn so wɔ car no mu. Ɔse ”Kodjo tena bra ne so, Ama tena maame wei so, Yaa kɔ akyire hɔ na tena papa ne so, ɔde saa na nkwadaa no nyinaa nyaa baabi tenaa yɛ. Wei na mese, wei diɛ mayɛ lucky kraa, afei me wɔ hɔ aaa na maame yi tam ntos(tomatoes) ne bankye(cassava) de sii me ti so, na ɔyɛ panyin nti mese menka hwee. Ankyɛ biaa na ɔsan yii Koobi ne Mɔmɔne de hyɛɛ mensa mu. Afei bɛhwɛ car no mu scent paa… boy m’kasa yi ya kyekyere me abɔ car no ho de mene car no kɔ washing bay. Now I need volunteers to untie me from the car.
MA W’ANI NSƆ NEA WO WƆ
Papa bi aa na ɔyɛ boafoɔ, na ɔsan wɔ ayamyie – Na nipa aa ɛwɔ borɔno aa ɔteso no nim no esan ni nipa pa aa ɔyɛ no nti. Da kro bi na ɔyɛɛ sɛ opue akɔtɔ adeɛ wɔ kwan ho, na ɔnam aa ɔɔkɔ na ohuu purse tumtum bi wɔ mfutoro kwan no so. ɔfaa purse no na ɔhwɛɛ mu no, na biribia nnimu. Ankonam Papa yi gyina hɔ aa ɔɔtɔ adea wɔ store bi ho na Maame bi ne police bɛkye papa yi kɔɔyɛ.
Yɛde Papa yi kɔ too afie-ase (prison), na Maame no bisaa no sɛ “ne sika na ɔfa yɛ no wɔ he”? Nanso papa yi bua no sɛ “me faa purse no, na biribia nnimu oo, Mama”. Na maame yi de anibre so san bisaa no sɛ, “bra, mepawo kyɛw, fa sika no bra wai, na mede kɔ tua me ba no skul fees” Afei Papa yi hunu sɛ na maame no gyina hɔ aa nisuo fri n’anim ɛba. Na maame no nhu nnea ɔnyɛ ne ho kraa, efiri sɛ na onnim babia ɔbɛ san anya saa sika dodoɔ no biom.
Papa yi aa ahummɔbrɔ ahyɛ no ma yi ne sika nyinaa aa na ɛwɔ no ho saa bere no mu no de maa Maame no… ɔka kyerɛ no sɛ “Mama, gye sika wei ɛɛ, na me ma wo kosɛ nso wɔ nea asi no ho” Afei maame no de anigyeɛ kɔeɛ na na n’koma tɔ ne yɛm yie paa.
Nanso Police foɔ no angyae Papa yi, ɔmo kɔɔso bisa bisa no asɛm no ho. Maame no kɔ duru kwan mfimfini babi na ɔyɛɛ sɛ ɔkan sika na papa no de ma no no. Maame no kan sika no, na sika no bro ne deɛ na ɛwɔ purse no mu no so, ɛno nti ɛyɛ no hwanhwa kakra. Da kro bi, wɔ mere aa Maame no kɔ tua ne ba no fees no, ohu sɛ Papa tenten bi di n’akyi. Na ɔdwen sɛ Papa no be wia no biom nti ɔka kyerɛ Police nyin bi aa na ɔbɛn kwan no ho, saa police nyin yi aa na ɔne no kɔɔ ɛmere bi wɔ ne purse noa na ayera no ho asɛm no.
Nti Maame no ka kyerɛ Police nyin no sɛ Papa na odi n’kyi no ba wia no. ɛhɔ aa na ɔmo hu sɛ Papa no atwa ahwe(collapse) wɔ hɔ. ɔmo de mrika kɔ Papa no hɔ, na ɔmo duru hɔ no na ɔmo hu sɛ ɛyɛ saa Papa no aa Maame no se wafa ne purse no. Na Papa yi ayɛ mrɛ paa, nti Maame no yɛ confused kakra.
Ɛhɔ a Police nyin no ka kyerɛ Maame no sɛ “Da no, ɛnnyɛ sika no na ɔde maa wo, ɔde ɔnoa ne sika ma ɛma wo sɛ fa kɔ tua wo ba no fees no. Na ɔnnyɛ onipa na ɔfa wo sika no, n’ammom ɛyɛɛ no mɔbɔ bere a wo kaa wo ba no skul fees no ho asɛm kyerɛ no no – ɛna ɔde ne sika ɛwɔ ne ho no nyinaa ma wo da no. Afei ɔmo boa Papa yi ma no sɔreɛ na Papa yi ka kyerɛ Maame no sɛ “kɔ tua wo ba no fees no, na me gyina kwan ho ɛfa car na me huu sɛ wo kɔ, nti me bɔ mmɔden aa dii w’akyi sɛ nea ɛbɛyɛ aa, obi nsan wia wo ba no fees no biom”. Maame no ho dwiri no yie paa, na w’antumi ammue n’ano aka hwee…
­­Boy bi hyɛɛ da aa kɔɔ drug store bi, aa ɛnam so ma no nyaa adwuma ɛmmerɛ bi yɛɛyɛ sɛ ɔɔkɔ pɛ aduro(medicine) atɔ… na oduru hɔ no, ɛna ohuu sɛ paper n’a some months ago ohuu Job Opportunity wɔ so no daso tare wall no ho aa ya twerɛ so sɛ, ”Cleaner Needed Urgently, CALL THIS NUMBER (0552346778)”. Na abrantiɛ yi nim paa sɛ number na ɛtare hɔ no yɛ ne boss diɛ, nanso ɔhyɛɛ da de mobile phone foforɔ frɛɛ ne boss no.
Sei na ɔmo nkɔmɔ die mu kɔɔ yɛ;
Boy: Helloo, mepawokyɛw, Good morning… mesrɛɛ wo aa, me huu sɛ job opportunity bi wɔ drug store na mese me frɛ sɛ manya adwuma bi ayɛ aa.
Maame no: Maame no ka kyerɛɛ no sɛ ”ow sorry bra, me wɔ obi dada wai. Medaase.
Boy: Ow Maa, wei diɛ mesrɛɛ wo aa. Wo pɛ kraa aa te pay no so, yɛ no half of wo current worker no diɛ no mame ɛɛ…
Maame no: Aww bra, nipa na ɔyɛ m’dwuma mame no ɔyɛ adeɛ paa… na m’ani gye na dwuma ho nso. Menfa no ntoto nnipa biara ho nanso menhyiaa obi tesaa da, mepɛ ɔno aa saa wai.
Boy: (with perseverance he added) Maa nka me tumi de wo mba no mpo akɔ skul ama wo oo, mɛ kyerɛ ɔmo adeɛ free, na masan anoa aduane nyinaa ama wo ne w’abusua nyinaa. Me srɛ wo aa, fa me wai…
Maame no: Braa daabi, meda w’ase
Abrantiɛ yi de sereɛ endii call no, na ɔdaa Nyame ase, aduro wura(shop attendant) no aa na ɔɔhwɛ no de awerɛhoɔ kɔɔ boy no ho ka kyerɛɛ no sɛ ”I like your Good attitude, I would like to offer you a Job”. The boy replied ”No, thank you sir”. The attendant added but you were really pleading for one, why don’t you take the offer? Boy yi de anigye ka kyerɛɛ attendant no sɛ… ”Na mee hwɛ me performance wɔ adwuma aa me yɛ ma me madam no, me na meyɛ ne dwumayɛnii aa me yɛ adwuma ma no mprenpren yi.